Somalia oo noqotey dalka ugu musuq maasuqa badan caalamka sanadka 2019 | Salaan Media
Somalia oo noqotey dalka ugu musuq maasuqa badan caalamka sanadka 2019
January 23, 2020 | Published by: Hamse
Inkasta oo maamulka Farmaajo uu mar weliba sheego horumar laga gaadhay dhanka maaliyadda, isla xisaabtanka iyo dib u habeynta hey’adaha dhaqaalaha, xidhiidh wanaagsanna uu kala dhaxeeyo hey’adda IMF-ta iyo bangiga adduunka, hadana taasi kama saarin liiska ugu hooseeya musuqa adduunka ee 2019-ka. Waa sanadkii 3-aad ee maamulkiisu noqdo kan ugu musuqa badan dunida.
Transparency International, oo soo saartay warbixinteeda 2019, kana sameysay ilaa 180 dal oo caalamka ah, Soomaaliya waa dalka 180-naad, dalka ugu liita ama ugu hooseeya liiska, oo waxaa ay heshay 9 dhibic ee 100-ka dhibici ee cabirka CPA.
Sanadkii tagay waxaa ay Soomaaliya aheyd sidoo kale dalka ugu liita musuqa laakin dhibcaha ay heysatay waxaa uu ahaa 10/100 laakin sanadkan hoos ayey uga dhaceen oo waa 9 dhibic.
Hey’addan waxaa ay la yaabtay madaxda Afrika oo qaarkood afka ka sheega ladagaalanka musuqa amaba kursiga kuyimid oo hadana iyagii ceebta dhex fadhiya.
Madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo markii xafiiska qabanayey waxaa uu xildhibaannada hortooda ka balanqaaday in Soomaaliya ay noqon doonto sida Denmark, laakin 3 sano kadib waxaa uu dhex jiifaa ceebtii uu ka sheekeynayey.
Khudbadda Murashax Farmaajo 2017: “Musuqmaasuqa waa cadowga siyaasadda cadowga dowladeed waaye sida shabaabka ay cadowga shacabka u yihiin yaana musuqmaasuqa u yahay cadowga horumarka waxaa laba bil ka hor ay soo saareen waxaa la soo saaray inaan nahay waddanka ugu musuq maasuqa badan aduunka 176 baan uga jirnaa, waddanka ugu horreeyana waa Denmark, maxaa noo diiday inaan Denmark latartano? maxaan ugu jirnaa inaan noqono dadka ugu xun dunida? illeen musuqmaasuq micnaheedu waa tuug diinteena ma ogola dad islaam ah ayaan nahay ,maxaa nagaarsiiyay inuu aduunka nala yaabo ay yiraahadaan dadkaan bani aadam maahaan .
“Walaalayaaloow mudanayaal iyo marwooyin hadaad idoorataan musuqmaasuqeyga musuqmaasuqa waa beegsigeyga ugu horreeya waa la dagaalamaynaa si fool xunna waan ula dagaalamaynaa qofkii hantida qaranka ku takri fala umaddana waan ku ceebaynaynaa xabsi dheerna waan u diraynaa “.
Madaxweynihii hore ee Galmudug oo kulan la qaatay Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle
Somaliland oo si kulul uga jawaabtay hadalkii ka soo yeeray C/raxmaan Guulwade
New York Times: Ciidanka Kenya waxay ku dhuunteen cowska markii Al-Shabaab ay soo weerareen Manda Bay
Transparency International, waxaa ay ku talineysaa mar haddii doorasho la aadayo 2020-ka in Soomaaliya ay hirgeliso barnaamij isla xisaabtan oo dhab ah.